होकाईदोको तिन ताल जसले हजुरलाई प्रकृति संग मिलाउने छ | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > HOKKAIDO > होकाईदोको तिन ताल जसले हजुरलाई प्रकृति संग मिलाउने छ
होकाईदो (北海道) प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको जापानको उत्तरी भूभागमा रहेको प्रान्त हो। होकाईदो संसारका केहि निकै सुन्दर निला तालको लागि पनि प्रशिद्ध छ। यी तालहरु हेर्नको लागि मात्रै भनेर पनि थुप्रै पर्यटकहरु होकाईदो जाने गर्दछन। यी तालहरु को बनोट निकै भिन्न हुने गरेको छ। आज हजुरहरुलाई होकाईदोमा रहेको तिन घुम्नै पर्ने तालहरुको जानकारी गराउने छु।
१. माशु ताल (摩周湖)
A post shared by Sony – For Her (@sonyforher) on Mar 13, 2019 at 6:20am PDT
माशु ताल तेशिकागा भन्ने ठाउमा पर्दछ। यो ताललाई माशुको पनि भनिन्छ। यो एक फ्रेश वाटर कालडर ताल हो। तेशिकागा आकन नेसनल पार्कमा (阿寒国立公園) छ। यो पार्कमा अन्य दुइ सुन्दर ताल -आकन र कुशारो ताल छन्। यो ताल ७००० वर्ष अगाढी बनेको हो। अहिले यो तालको गहिराई २१२ मिटर छ। यो तालमा कुनै खोला नजोडिएकोले यहाँको पानि सधै चिसो हुने गरेको छ। पानि पनि निकै संग्लो भएकोले यो ताल घम्लागेको बेला टल्किने गरेको छ। अहिले धेरै जसो हुस्सो लाग्ने हुनाले निल रंगको ताल सजिलै संग देखिदैन। तर पनि यो गन्तब्य एडभेन्चर खोज्नेहरुको लागी रमाइलो छ।
ताल जाने बाटो
२. शिकोचु ताल (支笏湖)
A post shared by 吳珝陽 • Duke (@wu_duke) on Mar 26, 2019 at 4:32am PDT
यो अर्को ज्वालामुखीबाट बनेको क्रेटर ताल हो। यो होकाईदोको दक्षिन भागमा पर्दछ। यो तालको गहिराई ३६३ मिटर छ। यो जापानको दोस्रो सबै भन्दा गहिरो ताल हो। यो तालमा बरफ नभएकोले माछा मार्न र डुङ्गा चढ्न निकै प्रशिद्ध छ। यो तालको छेउमा बास बस्नको लागि सा-सानो होटेलहरु पनि छन्। तर यो होटेलहरु सदै जसो प्याक हुने गर्दछन। शिकोचु ताल वरिपरि पहाडले घेरिएको हुनाले क्याम्पिंग गर्न निकै रमाइलॊ ठाउ हो। यहाँ घुम्न जाने बेस्ट महिना भनेको गर्मि सुरु भएदेखि अक्टोबरको अन्तिम सम्म हो।
३. आकन ताल
A post shared by 増元大輔 (@kesuidatomosuma) on May 6, 2019 at 8:01am PDT
होकाईदोको अथेण्टिक प्राकृतिक सुन्दरतामा हराउनको लागि आकान ताल पर्फेक्ट ठाउ हो। यो ताललाई मारिमो पनि भनिन्छ। यो ताल मा हेर्दा मोस् प्लान्टका बल जस्ता आकारहरु देखिन्छ। यी पछि गैर ठुलो हरियो मोस् बन्छन। मोस् होकाईदोको यो तालमा मात्र पाईन्छ। यो ताल सुन्दरता र रहस्यले भरिएको छ। त्यो माथि छर्लंग भुई सम्म देखि कन्चन पानीले यो ताललाई अझ सुन्दर बनाउछ। यो तालको छेउ छाउमा पुराना जंगलहरु पनि छन्। यहाँ हजुरले अनेक क्रियाकलाप गर्न सक्नु हुनेछ- क्यानोइङ्ग, स्टारगेजिंग, बोटिंग, फिशिंग, क्याम्पिंग, स्किइंग, स्नोबॉर्डिङ्ग आदि।
आकान तालको वेबसाईट
यदि हजुरलाई निलो प्राकृतिक तालहरु हेर्न मन छ भने पक्कै पन यो तिन ठाउमा जानु होस्। हजुरले पक्कै पनि पछुताउनु हुने छैन। यी ठाउ गइसक्नु भएको छ भने हामीलाई हजुरको अनुभब तल को कमेन्ट बक्समा बताउन नभुल्नु होला।